UPutin noKabaeva: umtshato, umtshato, abantwana, isithombe. UPutin noKabaeva "batshata ngokwenene?"
Nangona kunjalo, ngaba uPutin noKabaeva batshata okanye hayi?
Ubomi bomntu kaVladimir Putin no-Alina Kabaeva
Amahemuhemu athi uKabaeva ngu "umngane" kaPutin waqala ukusasazeka ukususela ngo-2006. Ngokuqhelekileyo ukusuka ekuqaleni komsebenzi wakhe kwezobupolitika, u-Alina wangena kwiNgqungquthela yeRashiya, uMongameli waseRashiya, ngokugqithiseleyo wabonakala kunye naye kwiziganeko ezisemthethweni nakwizwe. Ingqungquthela echazayo malunga nomtshato ozayo we-gymnast u-Alina Kabaeva kunye noVladimir Putin kwiphepha loMgqibelo wephephandaba leMoscow umbhali, elipapashwe ngo-Aprili 12, 2008, longeze umlilo. Iindaba zazisasazeka ngeenxa zonke kwihlabathi kwaye zaphinda ziphinda zipapashwe ngamajelo amaninzi aseYurophu, kuquka iLondon Evening Standard.
ULudmila Putin uye wahlala ngaphandle komyeni wakhe ixesha elide endlwini yakhe i-1.5 million yeedola.
Emva kokupapashwa kwinqaku, kwakukho amahemuhemu athi uPutin wahlukanisa ngasese umfazi wakhe, kwaye ukuba iipassports zabo sele zithwale isityikityi sesigqibo esisemthethweni somtshato. Ubomi obuvaliweyo bukaLyudmila Putin "buqinisekisile" la mahemuhemu. Kwaye kwathiwa ukuba emva kokuqhawula umtshato waba ngununu. Kwaye i-New York Post yabhala ukuthi uLudmila Putin uhlala ngaphandle komyeni wakhe kwikhaya lakhe eli-1.5 yezigidi zeedola iminyaka emininzi. Amahemuhemu aphinde aqinisekiswe kukuba inenekazi yokuqala yelizwe yayingekho kwi-yokuvulwa kukaPutin yekota yesibini yeofisi. Umongameli waseRashiya waphika amahemuhemu omtshato. Kodwa umshicileli phantse nsuku zonke wondla abantu ngeentshukumo ezintsha kunye ezintsha. Ngaloo nto kuthiwa ngumhla wohlobo lomtshato kaPutin noKabaeva-Juni 15, 2008.
U-Putin wathi kwinqaku le-correspondence yaseMoscow "akukho lizwi elinye lenyaniso". Ngomhla wokumenyezelwa, ngengozi emangalisayo, umlawuli jikelele wephephandaba wathi le phephandaba liye layeka ukusebenza. Iindaba zavuselela intanethi yoluntu, akukho mntu ukholelwa ukuba le nto yenzeke ngokungahambi kakuhle.
Unyana oqhelekileyo kaPutin noKabaeva
Ngo-2009, kwi-Intanethi, kwathiwa uAlina wayezala unyana kaPutin, waza wabizwa ngokuthi nguDmitry - ngokuhlonipha uMongameli uDmitry Medvedev. Le nkwenkwe ifana kakhulu noyise owaziwayo, njengoko kuboniswe yisithombe esithunyelwe ngabablogi, apho iKabaeva ibambe inkwenkwe ezandleni zayo. Iindaba zapapashwa yiNew York Post, yathi uKabaeva wayenendodana eMoscow. Umdlalo wezemidlalo ngokwakhe wayenqabile ngokwenene le nto, ephikisana nokuba inkwenkwe esithombeni, endimthabatha unyana wakhe, ngokwenene ngumntakwabo, kamva uAlina wathi uyindodana yomhlobo wakhe. Ukususela ngoko, imoto yamahlebezi, ukukhawuleza ukusuka entabeni, yayingasayi kumisa.
Ubomi obunobuntu obufihlakeleyo no-Alina Kabaeva bufunde apha .
Bangaphi abantwana abanomdlali "ongaziwa"?
Ngo-2012, u-Putin waphinde wanikwa umshicilelo kwinqanaba elithandwayo Page 6 (Iindumko) eNew York Post. Kwinqaku kwakukho ukuthetha ngento yokuba u-Alina Kabaeva wazala uMongameli waseRussia umntwana ongeyena wesini. Kwaba namahemuhemu ukuba uPutin wayethumele iKabaev kunye nabantwana ababini behlangene kwihlobo lakhe lokuhlala eSochi. "Nangona nje kungekho ubungqina obufanayo bokuhamba, okanye nokuba u-Alina ngokubanzi wabeletha umntu," ngelo xesha wabhalela uPlitkar.
I-Kabaeva sele isele okwesithathu yazala uMoya oyiNgcwele, owona suku lwesibhozo awunakuwufumana
Ngo-Matshi 2015, i-Swiss edition yeBlick yabika ukuba umlingisi waseRashiya u-Alina Kabaeva wazala intombazana edolophini yaseSorengo kwikliniki edumile yaseSt Helena. Ngeli xesha, u-Putin wanyamalala kwintsimi yombono weendaba, i-intanethi yilahlekile. Umongameli waseRussia Federation akazange afe, njengoko kuthethwa kwiintanethi zentlalo, kodwa mhlawumbi waya kwiindawo zokuzalwa zaseKabaeva.
I-intanethi yaqala ukudlala amahlaya: uKabaeva sele sele ezele okwesithathu wazala uMoya oyingcwele, owona suku lwesibhozo awunakuwufumana; okanye-ukususela ekubanjeni isandla okunamandla kukaVladimir Vladimirovich uAlina Kabaeva uzalisa okwesithathu.
Inkqubo yeCorriere del Ticino yabika ukuba u-Alina ekliniki emagumbini amathathu ayilungiselelwe - enye yokunikezelwa, yesibini kwintsapho, yesithathu yomlindi. Kwaye kwaxelwa ukuba ngexesha lokuhlala kukaKabayeva, umzimba wezonyango wawuqashwe kakhulu. I-Kremlin yathi ithetha kuphela ingxelo kwiingxelo ezisemthethweni.
Ngaba u-Putin unobhala? Okanye ayikho ...
Ngo-2013, uVladimir Putin waqhawula ngokusemthethweni umkakhe uLyudmila. Kwaye kwiphephandaba kwakhona laqala ukuxubusha inkululeko yakhe inoveli kunye neKabaeva. Iimidlalo zeOlimpiki zika-2014 eSochi zazisa amahemuhemu amasha. Ngethuba lokuvula ngomnwe wendlela yokuzivocavoca ipaparazzi yathwebula umtshini womtshato. I-Kabaeva ayizange ibeke ingxelo ngale ndlela nangayiphi na indlela. Kwaye mhlawumbi wonk 'ubani uyalilibala eli ganeko, ukuba kungenjalo "kodwa" .... NgoFebruwari 13, ekuphakameni kwee-Olimpiki, uPutin uza nomngane womtshato ukudibana noMphathiswa woKhuselo waseYiputa. Ukutshatyalaliswa ngokukhawuleza!
"Njengoko ndaxelelwa, uPutin noKabaeva batshatile namhlanje kwiNdlunkulu ye-Iver. Yonke into kaValdai ikhutshwe, "-kusasa ekuseni yabhala ingxelo kwi-Twitter ngoSeptemba 21, 2013, uKaloy Akhilgov, igqwetha lase-Ingushetia. Le rekhodi iqokelele ngaphezu kweyure. Kwaye emini, i-Intanethi yayigcwele amahlebezi athi uPutin washada noKabaeva.
Amahemuhemu ngomtshato kaPutin noKabaeva ngokuhlwa kwamhla kwangomhla wachaza kumabhali oonobhala weMongameli uDmitry Peskov, ababiza ngokuthi "umzibelo weMigqibelo wokuzikhukhumeza", kwaye wacebisa ukuba angene ebomini bomntu womongameli. Kwakhona waphawula ukuba intloko karhulumente ayinaso ixesha lokuphila komntu. Nangona kunjalo, oku akuzange kuqinisekiswe intlalo ye-intanethi, abantu kuluntu babuzwa ngokungafaniyo ngombuzo owodwa: Ngaba uVladimir Putin watshata okanye awunalo?
UPutin noKabaeva baphinde batshata?
Ngo-2015, inqaku lavela kwi-Twitter: "Ngo-Apreli 27, uMongameli waseRashiya uvakashele ngasese Baalim, apho watshata khona uKabaeva. Lo mbhiyozo wenziwa kwi-Spaso-Preobrazhensky i-Valaam Monastery. Abantu abangama-20 babekho kuloo mbhiyozo. Phakathi kwabo kwakukhona uValentina Matvienko noSergei Naryshkin. " Emva komtshato, uPutin wagijimela nge-helicopter eya ePetrozavodsk. Kwaye kwathiwa kwakukho iifoto ezisuka kumtshato, kodwa nanamhlanje akukho mntu wabonayo.
Nangona kunjalo, ngaba uPutin noKabaeva batshata okanye hayi? Ngaba banabantwana abahlangeneyo okanye akunjalo? Zigqibo wena! Ngendlela, u-Alina wenqaba ngokupheleleyo ubudlelwane noPutin, kwaye uyaqinisekisa ukuba akanalo abantwana nonke. Nangona kunjalo, ixesha lokugqibela umvocavoti wabonakala kunabantu abangaphezu konyaka odlulileyo. Kwaye nangobusuku bentlokontle yomqeqeshi wakhe u-Irina Wiener, akazange abonakale ...
I-Banana inikela ngama-walnuts
Ingulube ibhaka inhlama
Indlela yokusinda ibhinqa kwinqela lamadoda?
I-jelly yamanzi kunye namaqabunga uCharlotte
Ukucoca umzimba phambi kweeholide zasebusika
I-Chlamydia njengosulelo oluqhelekileyo lwezesondo kwihlabathi